March 2018 - Page2of9- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
တားကြလေ နည်းအထွေထွေ အမျိုးသမီးတို့ရေ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေ နေ့စဉ်သောက်ရလို့ မုန်းနေပြီလား။ နေ့စဉ်သတိထားပြီး သောက်စရာလဲမလို ကြာရှည်လည်း ပဋ္ဋိသန္ဓေတားပေးနိုင်တဲ့ နည်းတွေ ရှိသေးတယ်ဆိုတာကော သိကြရဲ့လား။ အဲဒါတွေက ဘာတွေလည်း။ ဒီနည်းလမ်းတွေမပြောခင် ကိုယ်ဝန်တားနည်းအလုံးစုံကို အဆင့်လိုက်ခွဲပြီး နည်းနည်းရှင်းပြမယ်နော်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ဆိုတာ အမျိုးသားရဲ့ သုတ်ပိုးနဲ့…
Glutathione or အသားဖြူဆေး အသားဖြူဆေးအကြောင်းသိချင်လို့ လာလာမေးတဲ့ friends တွေအတွက် သိသလောက် ပြန်ရှင်းပြပေးထားတာပါ ဒီဆေးလေးကတော့ ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆေးထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် ပထမဆုံးအနေနဲ့glutathioneမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်လေးတွေကတော့ L cysteine, L glutamic acid နဲ့ glycine (amino acids တွေပေါ့နော်)…
Aloe Vera for Your Beauty
အလှအပတွက် ရှားစောင်းလက်ပတ် ၁) ခေါင်းလျှော်ရည် ထဲထည့်ပြီး သုံးနိုင်သည်။ ပုံမှန်သုံးနေကျ ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲသို့ လျှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်ကို ထည့်ပေးပါက ဆံသားခြောက်သွေ့ခြင်းကို သက်သာစေပြီး ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။ ၂) ဦးရေပြားကို တိုက်ရိုင်လိမ်းနိုင်သည်။ လျှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်ကို ဦးရည်ပြားသို့ တိုက်ရိုက် နှိပ်နယ်လိမ်းကျံပေးပါက ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို…
ကျန်းမာစွာဖြင့် နမ်းပါ “မိုးတွင်းမဟုတ်လို့ ငါလည်း ပေါ့ထားလိုက်မိတာ ကလေးက ဝမ်းတွေလျှောလို့ ” “TB ဖြစ်တာတဲ့” “အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ဖြစ်တာ ” သူငယ်ချင်းတွေ သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေအတွက် စိုးရိမ်တကြီးကိုယ့်ကို မေးကြတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။ မိုးရာသီ မဟုတ်ပေမယ့် ဒီရောဂါတွေက…
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခုခံမှုများ လူတွေမှာ စိတ်ဝေဒနာ အနည်းနဲ့ အများတော့ ရှိကြပါတယ် အဲဒီလိုပြောရင် လူတိုင်း ရူးနေတာလို့ ပြောတာလား မြတ်စွာဘုရားတောင် ဟောထားတာပါပဲ ပုထုဇ္ဇနော ဥမ္မတ္တကော တဲ့လေ အောက်ပါ အချက်ကလေးများကို လုပ်နေတာကိုက ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ဝေဒနာ ကနေ…
How to Balance Education and Health
“ကျောင်းနေပျော်ပြီး စာတော်ဖို့အပြင်” မိဘတွေဟာ သားသမီးတွေကို ကျောင်းတက်မှန်ပြီး စာတော်စေချင်ကြပါတယ်။ ကျောင်းနေပျော်မှစာတော်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိပါတယ်။ စာတော်ဖို့အပြင် ကလေးဟာ ကျန်းမာဖို့လည်းအရေးကြီးပါသေးတယ်။ ကျန်းမာပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘေးကနေ ဘယ်လိုတည့်မတ်ပေးမလဲ…ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမလဲ…ဆိုတာတွေကို အကြံပေးချင်ပါတယ်။ (၁) အာရုံစိုက်ခိုင်းပါ မိမိကလေးမှာ အိမ်စာတွေပါလာမယ်ဆိုရင် အဲဒီစာတွေကို တခြားအာရုံလွင့်ပါးမှုမရှိဘဲ…
လိင်တံအရွယ်အစားဟာ တကယ်ပဲအရေးပါသလား? ဒီမေးခွန်းဟာ အမျိုးသားတော်တော်များများမေးချင်သိချင်ကြမယ့်မေးခွန်းမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးလူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာ လိင်ကိစ္စဟာလည်းချန်လှပ်ထားလို့မရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရယ်ပါ။ဖိုမကြားမှာရှိတဲ့ သဘာဝကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာပြည်လိုနေရာမျိုးမှာ လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲနေဆဲပါပဲ။မိမိနဲ့ဆက်ဆံဖော်နဲ့တောင် လိင်ကိစ္စအကြောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောရဲတဲ့လူတွေရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီတော့ လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုးတိုးတိတ်တိတ်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အယူအဆမှားတွေနဲ့ မဖြစ်သင့်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာ အံသြစရာတော့မရှိပါဘူး။ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့လိင်အင်္ဂါအရွယ်အစားဟာ လိင်မှုဘဝမှာပျော်ရွှင်ဖို့အမှန်တကယ်ပဲအရေးကြီးသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာ Yes or No တစ်ခွန်းတည်းနဲ့ဖြေဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လူတစ်ကိုယ်အကြိုက်တစ်မျိုးဆိုသလို…
နွေရာသီအတွက် Sunscreen နေပူလာပြီဆိုရင် အရင်ဆုံးတွေးလေ့ရှိကြတာက ချည်ထည်ပွပွအကျီၤတွေ၊ ထီးတွေအပြင် ၊ နေရောင်ကာCream ( Sun Screen) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sun Screen လိမ်းခြင်းမလိမ်းခြင်းဟာ ဘယ်လိုတွေများ သိသာပြောင်းလဲစေလို့ပါလဲ? ၁) အန္တရာယ်ရှိတဲ့ရောင်ခြည် ( UV Rays)…
အမျိုးသမီးများသားကြောဖြတ်ခြင်း အမျိုးသမီးတွေသားကြောဖြတ်ကြတယ်ဆိုတာ တစ်သက်တာကိုယ်ဝန်မရအောင် တားဆီးတဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေကိုဖြတ်ပေးသလဲ? မြန်မာပြည်မှာတော့ သားကြောဖြတ်ဖို့ကိုလျှောက်လွှာတင်ရပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်အရွယ် ကလေးဦးရေနဲ့ ခွဲစိတ်မွေးဖွားထားတဲ့အကြိမ်ရေတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်။ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုခုအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးများကိုလည်း သားကြောဖြတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်မရအောင် တားဆီးတာလဲ? သားကြောဖြတ်ခြင်းဟာ အမျိုးသမီးရဲ့သားဥနဲ့အမျိုးသားရဲ့သုက်ပိုးတို့တွေ့ဆုံမယ့်လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာ သားဥပြွန်ဖြစ်တဲ့အတွက် သားကြောဖြတ်တဲ့အခါ သားဥပြွန်နှစ်ဖက်လုံးကို ဖြတ်တောက်ခြင်း ပိတ်ဆို့ခြင်းပြုလုပ်ရပါတယ်။…
လိင်အင်္ဂါတွင်ကြွက်နို့ပေါက်ခြင်း လိင်အင်္ဂါမှာကြွက်နို့ပေါက်ခြင်းဟာ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါပိုး (Human Papilloma Virus) ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ပေါက်ရင် ယားယံခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ နေရထိုင်ရခက်ခဲခြင်းတို့ဖြစ်စေပါတယ်။ တခြားနေရာမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ကြွက်နို့လိုပဲ အရောင်ကတော့ အရေပြားအရောင်အတိုင်း ဒါမှမဟုတ် အရေပြားအရောင်ထက်ရင့်ပြီး တစ်ခုတည်းလည်းဖြစ်နိုင်သလို စုပြုံပြီးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီး ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာတဲ့အထိ မပေါ်သေးဘဲ…